University of Texas at Austin, USA - Thola Ezemfundo Kwamanye Amazwe
University of Texas at Austin Yokuxhumana
Izwe : i-United States of America
isifinyezo : PHUMA
Wasekelwa : 1883
abafundi (ngu.) : 51500
Ungakhohlwa xoxa University of Texas at Austin
Bhalisa at University of Texas at Austin
University of Texas at Austin uyilungiselelo umphakathi ukuthi yasungulwa ngo 1883.
Yesikole Imali e-University of Texas ngesikhathi Austin kuyinto $35,000 (Aprox.).
Konke ezinkulu Texas, njengoba isisho, futhi siyiqiniso at the University of Texas at Austin, kwesinye sezikole ezinkulu e isizwe. Isikole Esinye salezi zimiso lesiGreki ezinkulu kuleli lizwe, ezimbili izincwadi ngobukhulu umfundi futhi ezingaphezu kuka 900 amakilabhu nezinhlangano for abafundi. Amathimba UT ngezinye Austin ezemidlalo kukhona izimbangi nedumela elibi Division mina Big 12 Conference, osekelwa mascot Bevo the Longhorn. The UT Tower, isakhiwo campus aqhoshayo, luthungelwa e wokushiswa orange umbala yesikole ngemva ezemidlalo Okwaphawuleka impumelelo futhi kuyakhanya a '# 1' lapho iqembu iwina ubuqhawe kazwelonke. Freshmen akudingeki ukuba baphile on campus, futhi bangase bakhethe ukuba siphile yedolobha Austin, ezingaba a mile ikota away. Sinentshisekelo is umculo eyaziwa, ukudla, imisebenzi ongaphandle kanye nightlife, futhi abafundi baya mahhala amabhasi sombuso Metro ubufakazi ID.
UT ihlukaniswe 18 ezikoleni nasemakolishi, the ngobukhulu okuyinto College of Arts Liberal. asebephothulile UT sika zihlanganisa zibalwa kakhulu McCombs School of Business, College of Education, Cockrell School of Engineering, College of Ubuciko, School of Nursing, College of Pharmacy School Wezenhlalakahle, ngaphezu eSikoleni kahle ithathwa of Architecture. UT inikeza amakhulukhulu cwaningo phesheya izinhlelo, ne izindawo ethandwa kakhulu Spain, Italy, -United Kingdom, France and China. alumni Okuphawulekayo zihlanganisa owabe imbiza Roger Clemens, umlingisi Mathewu McConaughey films “The Wedding Planner” futhi “Indlela Lose a Guy in 10 Izinsuku” futhi zangaphambili lady wokuqala Laura Bush.
College of Ubuciko
LBJ School of Public Wezindaba
Vuk College of Ukuxhumana
School of undergraduate Ucwaningo
Lapho kukhulunywa ngaye okokuqala eyunivesithi yomphakathi e-Texas usukela kuya 1827 umthethosisekelo isimo Mexican of Coahuila y Tejas. Nakuba Isihloko 6, Article 217 ka iSakhiwo wathembisa ukumisa imfundo yomphakathi kuleli kwezobuciko nesayensi, akukho senzo esithathiwe nguhulumeni wase-Mexico. Ngemva Texas etholwe uzibuse kusuka eMexico 1836, eTexas Congress yamukela uMtsetfosisekelo weRiphabhulikhi, okuyinto, ngaphansi kwesigaba 5 ka Amalungiselelo yalo Jikelele, kushiwo “Kuyakuba nejoka Congress, ngokushesha nje lapho izimo zizovumela, ukuhlinzeka, ngumthetho, uhlelo jikelele imfundo.” Ngo-April 18, 1838, “Isenzo Nokwenza University of Texas” wayebizwa ikomiti ekhethekile ye Texas Congress, kodwa akuzange kubikwe emuva esinye isenzo. ngoJanuwari 26, 1839, eTexas Congress bavumelana ukuba abekele eceleni esinye Izilimi ayisihlanu ezweni (ngu. 288,000 esingamahektare) maqondana ukusungulwa eyunivesithi uxhaso lwezimali. Ngaphezu kwalokho, 40 esingamahektare (160,000 m2) enhloko-dolobha entsha Austin babuyiselwa agodliwe futhi wakhetha “College Hill.” (Igama “Amane Acres” is colloquially lisetshenziswa ukuze libhekisele University sisonke. Lasekuqaleni amane esingamahektare ndawo kusukela Guadalupe ukuba Speedway kanye lama-21 Street 24 Street )
Ngo 1845, Texas ukuthi yayilokhu izidlela nje ku-United States. Ngokuthakazelisayo, UMthethosisekelo isimo sika 1845 kuhlulekile ukubalula isihloko imfundo ephakeme. Ngo-February 11, 1858, Seventh Texas isiShayamthetho evunyiwe O.B. 102, isenzo ukusungula University of Texas, okuyinto ubeke eceleni $100,000 e-United States izibopho ngase ukwakhiwa enyuvesi yokuqala isimo sika uxhaso lwezimali(le $100,000 kwaba isabelo kusukela $10 abayizigidi ezingu isimo wathola ngokulandela Ukuhlehla ka 1850 futhi Texas’ ngokudela izimangalo amazwe angaphandle kwelakwa yalo samanje). Ngaphezu kwalokho, sishayamtsetfo esiqokiwe umhlaba agodliwe ukuze kukhuthazwe sakha ujantshi ngase isipho senyuvesi. ngoJanuwari 31, 1860, -mthetho sesifundazwe, zokufuna ukugwema ukukhuliswa izintela, Kwadlula isenzo egunyaza imali eceleni ukuba University of Texas ukuze usetshenziselwe emngceleni okuziphendulela entshonalanga Texas ukuvikela izifiki ekuhlaselweni Indian. Texas’ secession kusukela Union kanye American Civil War imisiwe sokukhokhwa izimali ezibolekwe. Ekupheleni kulwiwa e 1865, I-University of Texas’ isipho kwakuba engaphezudlwana $16,000 e uyaqinisa lutho neziqinile okwakwenziwe ukuhlela imisebenzi yenyuvesi. Lo mzamo ukusungula University futhi zigaywe Article 7, Ingxenye 10 we Texas Umthethosisekelo walesi 1876 okuyinto iqondiswa umbiko ngaphambi kweSishayamthetho, “ukusungula, ukuhlela bese imali yesondlo, ukusekelwa nesiqondiso wamaNyuvesi ekilasini lokuqala, litholakale ngevoti zabantwana kule Nkulumo Echaza Isimo, futhi Kunesitayela “I-University of Texas.” Ukwengeza, Article 7, Ingxenye 11 we 1876 UMthethosisekelo wasungula Permanent University Isikhwama, lelitimele ingcebo Isikhwama siphethwe yiBhodi Regents wase-University of Texas futhi wanikezela wokugcinwa nyuvesi. Ngenxa yokuthi ezinye izishayamthetho isimo beqonda nokubukisa e ukwakhiwa academic namanye amayunivesithi, Article 7, Ingxenye 14 soMthethosisekelo ngokucacile kungavunyelwe isishayamthetho kusukela ekusebenziseni imali engenayo isimo sika jikelele ukuxhasa ukwakhiwa inyuvesi. Izimali sokwakha izakhiwo enyuvesi kwadingeka ukuba zivela isipho senyuvesi noma izipho zangasese eyunivesithi, kodwa izindleko nokusebenza enyuvesi ongazithola ngokwazi izimali isimo sika jikelele.
I 1876 SoMthethosisekelo futhi Ubuyise isipho yamazwe ujantshi we Isenzo 1858 kodwa abazinikezele 1,000,000 esingamahektare (4,000 km2) komhlaba, kanye nenye impahla eyabiwe enyuvesi, kuya Permanent University Isikhwama. Lokhu kwaba kakhulu, bese lokho kulimaza nyuvesi njengoba amazwe Unikeze inyuvesi njengoba kusho uMthethosisekelo 1876 emelelwe esingaphansi 5% yenani yamazwe okunikeze inyuvesi ngaphansi komthetho 1858 (amazwe eduze kwezitimela ayewusizo ngempela kuyilapho amazwe Unikeze inyuvesi abekade kude entshonalanga Texas, kude imithombo yezokuthutha amanzi). Amazwe ligugu ukubuyela kulesi sikhwama ukusekela imfundo jikelele esimweni (Special School Isikhwama). Ngo-April 10, 1883, sishayamtsetfo kulekelelwa le Permanent University Isikhwama nomunye 1,000,000 amahektare amaningi endawo e entshonalanga Texas ayenikwe Texas and Pacific Ujantshi kodwa wabe esebuyela kwi isimo obonakala ezingenanzuzo kakhulu ngisho inhlolovo. Isishayamthetho ngaphezu kwalokho eyabiwe $256,272.57 ukukhokha izimali ethathwe eyunivesithi 1860 ukukhokhela emngceleni ukuzivikela futhi ukudluliselwa Jikelele Isikhwama yembuso 1861 futhi 1862. I 1883 isibonelelo komhlaba anda izwe Permanent University Fund cishe 2.2 abayizigidi ezingu esingamahektare. Ngaphansi komthetho 1858, inyuvesi inelungelo nje phezu 1,000 esingamahektare komhlaba wonke imayela of ujantshi eyakhelwe esimweni. Ukube yasekuqaleni 1858 isibonelelo komhlaba ayibuyisiwe yi 1876 uMthethosisekelo, by 1883 amazwe inyuvesi ngabe bezingaphansi 3.2 abayizigidi ezingu esingamahektare, ngakho 1883 isibonelelo kwaba ukubuyisela emazweni othathwe inyuvesi yi 1876 uMthethosisekelo, kungesona isenzo munificence.
Ngo-March 30, 1881, sishayamtsetfo ebhalwe isakhiwo nenhlangano we nyuvesi, yathi kumele kwenziwe ukhetho ukusungula indawo yayo. Ngu ukhetho ethandwa ngoSepthemba 6, 1881, Austin (nge 30,913 amavoti) wakhethwa njengosuku site of the nyuvesi main. Galveston, abasenawo e yesibili okhethweni (20,741 amavoti) yakhethwa indawo womnyango wezokwelapha (Houston kwaba zangaphandle 12,586 amavoti). On November 17, 1882, woqobo “College Hill,” umkhosi olusemthethweni lagujelwa bakhumbule kubekwa legumbi isakhiwo Old Main. University uMongameli noAshebhele Smith, eyengamela ngokwesiprofetho emcimbini wamemezela “Texas ulindele linamathele emhlabeni yayo amatshe namaminerali adingwa manje amanga angenzi lutho ngoba akwaziwa, nomnotho mikhulu Umbuso zezimboni, basuke bengabangane bengcebo namandla. Nawokushaya umhlaba, ushaye amatshe ngenduku ulwazi nemithombo ingcebo unstinted gush naphambili.” I-University of Texas ngokusemthethweni yakhoselisa ngoSepthemba 15, 1883.
Umtapo lokuqala kamongameli ku abafundi basezikhungweni zemfundo ephakeme lanikezelwa ngo-May 22, 1971 ne uMongameli wangaphambilini Johnson, Lady Bird Johnson bese-uMongameli Richard Nixon ababekhona. Esakhiwe ohlangothini olungasempumalanga campus main, the Lyndon Baines Johnson Library kanye Museum ingenye 13 imitapo kamongameli zaphathwa National Archives futhi Records Administration.
ISITHOMBE noMartin Luther King, jr. lesikhumbuzo ku campus 1999 futhi kamuva phansi. By 2004, John Butler, onguprofesa theMcCombs School of Business wasikisela ukuthuthela khona waseMorehouse College, ngokomlando elimnyama ekolishi, “indawo lapho yena othandwayo.”
I-University of Texas at Austin sihlangabezane igagasi ukwakhiwa entsha esanda izakhiwo eziningana abalulekile. Ngo-April 30, 2006, isikole wavula Blanton Museum of Art. Ngo-August 2008, AT&T Executive Ezemfundo kanye Isikhungo senkomfa wavula, ngengxenye ehhotela nesetinkomfa kwakhiwe esangweni entsha eyunivesithi. Futhi in 2008, Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium lwandiswa umthamo bahlalaphi 100,119, okwenza kube inkundla enkulu kunazo zonke (ngokukhuphula umthamo) esifundazweni sase-Texas ngesikhathi.
ngoJanuwari 19, 2011, eyunivesithi, ememezela ukusungulwa kwethelevishini inethiwekhi angu-24 ngokubambisana ne-ESPN, elika Longhorn Network. ESPN ngeke ukhokhe $300 abayizigidi ezingu yibhange imali amalungelo phezu 20 iminyaka eyunivesithi kanye IMG College, umlingani amalungelo multimedia UT Austin. Inethiwekhi ihlanganisa athletics senyuvesi intercollegiate, umculo, ubuciko kanye netifundziswa izinhlelo kwamasiko. Isiteshi sokuqala senza in September 2011.
Uyafuna xoxa University of Texas at Austin ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
University of Texas at Austin kumephu
Izithombe: University of Texas at Austin Facebook ezisemthethweni
University of Texas at Austin Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa University of Texas at Austin.
Izincwajana zemininingwane emayunivesithi United States of America